မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖေါက်နေတဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ ရောထွေး ယှက်တင် ပါဝင် ပူးပေါင်းပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဦးတေဇနဲ့ မိသားစုကို ဥရောပ သမဂ္ဂ အီးယူက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဦးတေဇနဲ့ မိသားစုဟာ အီးယူနိုင်ငံတွေမှာ ခရီးသွားခွင့်၊ ပညာသင်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးတေဇရဲ့ သားကြီး ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇက သူ့ကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အီးယူ တရားရုံးမှာ အယူခံ တင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇကို အနိုင်ပေးလိုက်တဲ့ အပေါ် အလွန်ပဲ စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ဗြိတိန် အခြေစိုက် UK Campaign for Burma ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mark Farmaner က ပြောပါတယ်။
အမှုမှာ အနိုင်ရပေမယ့် ဦးတေဇတို့ မိသားစုဟာ အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေတဲ့ စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်မှုကိုတော့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ Mr. Farmaner ကဆိုပါတယ်။
"တကယ်လို့ ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇ ဥရောပနိုင်ငံတွေကို ရောက်လာတဲ့ သတင်း ကြားတာနဲ့ သူသွားမယ့် နေရာတွေကို လိုက်ပြီး ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ကြမယ့် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှား တက်ကြွတဲ့ မြန်မာတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အသေအချာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇ အမှုကို တရားရုံးက အနိုင်ပေးလိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ကျိူးရှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးရဲ့သားအနေနဲ့ ဥရောပမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မယူဆသင့်ဘူး” လို့ Mark Farmaner က ပြောဆိုပါတယ်။
NLD သင်တန်းကိစ္စ ဦးတေဇ ရှင်းလင်း
စစ်အစိုးရကို ပံ့ပိုးသူ လုပ်ငန်းရငြ်ိံစြ်ဦး သီရိပဵံခဵီဘြဲႚ ခဵီးေူမၟာက်ခံရ
ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမဍ္ဎဏီက လယ်သမားမဵားကို အတိုးဖင့် ငေခြေဵးမည်
မဂဿလာဒုံလေတပ်စခန်းကို ဦးတေဇပိုင် ပုဂံလေေုကာင်းလိုင်း အသုံူးပမြည်
ဖြိုးတေဇရေ မင်းမိသားစုဆကြောင်း မင်းအသိဆုံးပါ အရှက်အကြောက်တရား ရှိကြပါကွာ။
He is lier.
FATHER SHARE TO SON .
HOW CAN THEY CONTROL TAY ZAR AND HIS SON.
Dec 11, 2011 08:37 AM
Dec 08, 2011 09:41 AM